नारायणकाजी श्रेष्ठसंग नाम जोडिएपछि कमानसिंह लामाकि श्रीमती मिडियामा आएर सुनाईन आफ्नो पि’डा… (भिडियो) – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > नारायणकाजी श्रेष्ठसंग नाम जोडिएपछि कमानसिंह लामाकि श्रीमती मिडियामा आएर सुनाईन आफ्नो पि’डा… (भिडियो)
नारायणकाजी श्रेष्ठसंग नाम जोडिएपछि कमानसिंह लामाकि श्रीमती मिडियामा आएर सुनाईन आफ्नो पि’डा… (भिडियो)
admin December 18, 2020 December 18, 2020 जीवनशैली, भिडियो	0
काठमाडौं । कमानसिंह लामाको निधनपछि पत्नी इन्द्रमाया तामांग, नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र सुसन कर्माचार्य बीच प्रश्नहरु तेर्सिएका छन् । कमानसिंहले आरोप लाए अनुसार डेढ करोड रुपैयाँ सुसनबाट लिन नारायणकाजीले असहयोग गरेको र साथै आफ्नो घर बिगारेका छन् । यहि आ’रो’प संगै अहिले नारायाणकाजी श्रेष्ठमाथी सामाजिक संजालमा प्रश्नहरु उठेका छन् । **समाचारकाे सम्पूर्ण भिडियो हर्न तल क्लिक गर्नुहाेस्**
कमानसिंहले आफ्नो घर बिगार्नमा नारायणकाजीको समेत हात रहेको उल्लेख गरेका थिए जसले गर्दा अहिले कमानसिंहकी कान्छी श्रीमती इन्द्रमाया तामांगको नाम नारायणकाजी श्रेष्ठसंग जोडिएको छ । यहि विवाद र नाम जोडिए पश्चात इन्द्रमाया तामांग मिडियामा आएर आफ्नो कुराहरु राखेकी छिन् ।
इन्द्रमायाले क्यानाडा नेपालका लागी मनोज मानवसंग कुराकानीमा आफ्नो नारायणकाजीसंग कुनै स’म्बन्ध नरहेको उल्लेख गरेकी छिन् । बरु आफूले श्रीमानबाट शंखादेखि पिडा पाएको कुराहरु व्यक्त गर्दै नारायणकाजी श्रेष्ठ निर्दोश ठह’र गरेकी छिन् ।
इन्द्रमायाका अनुसार सुसन कर्माचार्य र नारायणकाजी श्रेष्ठले बरु आफूहरुलाई सहयोग गरेको तर स्व. श्रीमान कमानसिंहले झुटो आ’रो’प लाएर अहिले विवादमा तानिएको हो । नारायणकाजीसंग के रिस थियो र त्यो भिडियो प्लान गरेर फ’साउन रेकर्ड गरिएको समेत उल्लेख गरेकी छिन् । श्रीमानका कारण आफ्नो समेत बिचल्ली भएको र आफू पनि ऋणमा डुबेको पिडा व्यक्त गरेकी छिन् ।
“आफ्नो श्रीमानको नि’ध’नको पिडामा पनि आफू यसरी स्पष्टिकरण दिनु पर्दा दुख लागेको छ । श्रीमानलाई खै के कुराले हो यस्तो आ’रो’प लाएर नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई विवादमा तान्नु भयो तर नारायणकाजी श्रेष्ठ निर्दोष हुनुहुन्छ । नारायणकाजीदेखि सुसन कर्माचार्यले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ तर सायद वहाँले बुझ्नु भएन कि त्यसैले आ’रो’प लाउनु भयो होला । सुसन कर्माचार्यले कुनै पनि पैसा नखाएको कुरा पनि प्रष्टाउन चाहन्छु ।” इन्द्रमायाले कुराकानीमा भनेकी छिन् ।
हे भगवान ! के हुन लाग्या हो ? यस्तो कहिल्यै देखिएन यस्तो, २० जाना धामीझाँक्रीले देखाए ताण्डप (भिडियो सहित्)
बिहान उठ्नासाथ यी १० चीज देखिए भाग्य खुल्छ, के हुन ती १० चिज? जान्नुहाेस्…
संसारमै सबैभन्दा राम्रो अक्षर लेख्ने सबिना मगरको आवाज पनि जादुमय छ (भिडियो)